AKINCI TİHA Dabere na, Bayraktar na Injinia Gwa | RayHaber | raillynews
HomeTurkeyCentral Anatolia Region06 AnkaraAKINCI TİHA Dabere na, Bayraktar na Injin Gwa
22 / 05 / 2020 06 Ankara, Central Anatolia Region, General, weather, Isi akụkọ, agbachitere, Turkey, VIDIO
Akinci tiha akwụkwọ, Bayraktar na injinia na-agwa
Mkpoko ụgbọ agha nke ụgbọelu nke mbụ na-atụghị anya ụgbọelu nke Turkey na Bayraktar AKINCI tiha usoro mmepe nke ọtụtụ ọnwa na-egosi “AKINCI” Akwụkwọ edemede May 24, 2020 ụbọchị Sọnde, ụbọchị mbụ nke ọnwa Ramadan, the You Baykara na elekere 20.23:XNUMXTube ga-agbasa na ọwa.
uzo di nkpa na ulo oru nchebe nke Turkey g’eduba n’otu n’ime ihe ndi di nkpa nke kariri oru ngo mmepe AKINCI Bayraktar (iwere UAV) bu ihe edere na akwukwo. Usoro ndị agha nke Bayraktar na-etolite n'ụgbọ agha ụgbọelu nke mbụ a na-achịkwaghị achịkwa nke ndị otu na-eme ihe ike nke Turkey na ndị ọkwọ ụgbọ mmiri "AKINCI" aha e nyere n'usoro akwụkwọ na-ekpughe maka oge mbụ.
Onye isi oru ihe omuma nke Baykar Selcuk Bayraktar biputara uzo abuo abuo na-akwalite ihe ngosi site na akaụntụ mgbasa ozi ya na-elekọta mmadụ. Akwụkwọ edemede a, nke na-ekwupụta usoro dị egwu dị egwu na ọrụ mmepe nke Bayraktar AKINCI T onHA, na Sọnde, Mee, 24, ụbọchị mbido mbụ nke Ramadan, akpọrọ "Baykar Teknụzụ" nke nke Baykar na 2020.Tube A ga-agbasa ya na ọwa izizi.
Mingse na-ese ihe ruru ọnwa isii
Maka akwụkwọ nke Altuğ Gültan na Burak Aksoy duziri, a na-eme mgbọ ruo monthsorlu Airfield Command ebe Baykar Milli S / İHA R&D na Mmepụta Ihe na Istanbul na Bayraktar AKINCI TİHA rụrụ. Edemede akwụkwọ a, nke bidoro na Febụwarị 2019, bụ ihe dị ka ọnwa iri na ise. Akwụkwọ edemede ahụ lekwasịrị anya n'ime ọnwa 15 ikpeazụ nke oge ọrụ siri ike ma na-arụsi ọrụ ike ruo mgbe ọnwa isii na Disemba 6, 2019, mgbe Bayraktar AKINCI mere njem mbụ ya.
Bayraktar na Injin Gwa
N'ime akwụkwọ ahụ, Baykar Technical Manager Selçuk Bayraktar na ndị isi nke ngalaba injinịa na-akọwa ọrụ a gbara ajụjụ ọnụ na ha. Usoro nke iwulite ụgbọ elu nke nwere akwụkwọ teknụzụ dị elu maka oge mbụ na Turkey ga-ezute ndị na-ege ntị.
Ndị Agbanarị Abụọ Ga-efepụ
Ihe atụ nke mbụ nke Bayraktar AKINCI, PT-1, mere ụgbọ elu nke abụọ ya dịka akụkụ nke Test Verification Test na Jenụwarị 10, 2020. Bayraktar AKINCI nke abụọ, onye mezuru njikọta ya na nso nso a ma kpọọ ya aha PT-2, ka ezigara Çorlu Airfield Command ebe ọrụ ule ahụ gara n'ihu. A ga-ebu ụzọ nyocha ikuku na ala nke Bayraktar AKINCI TİHA na ụdị abụọ.
Turkey ga-abụ otu n’ime mba atọ n’ụwa
Baykara zụlitere na ahụmịhe na teknụzụ maka mmepe ụgbọ ala UAV AKINCI Bayraktar, ụwa ga - eme ka Turkey bụrụ otu n'ime mba atọ kachasị elu ịzụlite ụgbọelu na - enweghị isi na klas a. Bayraktar AKINCI, nke nwere ike ịnọ na mbara ikuku ruo awa iri abụọ na anọ ma nwee ebe a na-arụ ọrụ nke 3 puku ụkwụ, pụtara ike ngụ ibu nke kilogram 24, gụnyere kilogram dị 40 kilogram na 400 kilogram mpụga. Bayraktar AKINCI TİHA, nke nwere kilogram 950, na-ebili elu igwe nke igwe turboprop 1.350 nke nwere ikike HP. Ezubere Bayraktar AKINCI TİHA ka ọ fechaa na nhazi dị iche iche maka igwe na - emepụta 5.500 2 450 HP na 2 × 750 HP nke etolite na akụrụngwa nke TEI.
Ije Ozi-Ikuku Ga-Eme
Ikpokoro ụgbọ elu, nke nwere nku dị mita 20 na njiri mara akụkụ ya pụrụ iche, ga-ewetakwa nchekwa ụgbọ elu dị elu maka njikwa ụgbọ elu ya na sistemụ ụgbọ elu 3 nwere akpaaka. Bayraktar AKINCI, nke ga - enwe ike iji mgboagha nke mba ọ ga - ebu ọrụ ya, ga - abụ nnukwu ikike na ikike ya iji mụta ngwa agha obodo mepụtara maka ebumnuche ndị dị ka ngwa agha ụgbọ mmiri SOM. Bayraktar AKINCI, nke ga-enwe ihe ịma ọkwa dị elu na ụlọ ọrụ AESA radar nke a ga-ahụ na imi, ga-enwe ike ịmụrụ ndị agha ikuku Gökdoğan na Bozdoğan site na TÜBİTAK SAGE. Aircraftgbọ elu ahụ, nke ga-eburu ibu dị oke egwu dịka igwefoto EO / IR, AESA radar, nkwukọrịta Beyond Line of Sight (satịlaịtị) na sistemụ elektrọnik, ga-enwekwa ọgụgụ isi dị elu nke ọgụgụ isi.
A ga-eji ọgụgụ isi mee ihe
Ọ ga - enwe ike ịnakọta ozi site na ịdekọ data ọ na - enweta site na sensọ na ese foto na ụgbọ elu site na kọmputa 6 ọgụgụ isi. Usoro ọgụgụ isi a, nke ga - enwe ike ịchọpụta akụkụ nke ịgbatị, guzo na isi nke ụgbọ elu ahụ na-enweghị mkpa ọpụpụ ọ bụla ma ọ bụ Global Positioning System (GPS), ga-ewepụta ozi banyere gburugburu. Usoro AI dị elu ga-enwe ike ịme mkpebi site na ịhazi data ọ nwetara. Usoro ọgụgụ isi a, nke ga - enwe ike ịchọpụta ala ndị mmadụ na - enweghị ike ịchọpụta, ga - eme ka ojiji Bayraktar AKINCI dịkwuo irè.
Ga-abụ onye ndu jiri ikike Rada
Site na rades AESA nke mepere emepe, Bayraktar AKINCI TİHA, nke nwere ike ịrụ ọrụ dị elu site na ịmara ọnọdụ dị elu, ga-enwe ike iji ihe ngosi ya na-eme Mkpanaka na-agagharị agagharị ọbụlagodi n'ọnọdụ ihu igwe dị njọ ebe sistemu optic optic na-enwe ihe isi ike na eserese. Ikpokoro ụgbọ elu, nke ga-agụnye igwe meteorology radar na radar maka ebumnuche ebumnuche, ga-abụ onye isi na klaasị a na klaasị.
(Isi mmalite: DefenceTurk)
Minista Bayraktar bụ ihe ijuanya banyere Trabzon Logistics Center
Ordu Boztepe Akwụkwọ (Video)
Istanbul Marmaray Project Channel Discovery Channel.
Objections Bilie Site Chamber nke Injinia Bursa Alaka N'ihi Ụgbọ njem Atụmatụ Na T-1
Ndị na-emepụta ihe na ndị engineer Kadıköy-Kartal kwuru banyere ụzọ ụgbọ oloko ya!
Nuri Demirağ Akwụkwọ nke mbụ ụgbọ okporo ígwè na-ewu ngo nke Republic of Turkey
Usoro mpempe akwụkwọ Tramway Silkworm
Akwụkwọ Marmaray si na German ZDF Channel
Gebzeli Engineers gara Gulf Bridge na Izmit
Ndị Nchọnchọ Gebzeli 3. Ọwa a na-enyocha
Mgbe Gulf Transit Bridge ama okụre
Ndị Injinia na-arụ ọrụ na Turkey na-emepụta Tractor Obodo na National Tract
Ndị injinia nyochare okporo ụzọ ụzọ Istanbul-Gebze-Orhangazi-Izmir
Metroray General Manager Cengiz Nna Nna okporo ígwè oru na Turkey agwa usoro
Şakir Zümre na-akọ akụkọ ncheta Atatürk